काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको क्षति मूल्यांकनकर्ताको तालिम सम्पन्न भएको छ । उक्त तालिम मंसिर १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म बर्दिवासस्थित गौतम होटलमा बीमा समितिको प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्पन्न भएको हो । बीमा समितिबाट जारी कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमा निर्देशिका,२०७७ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमा क्षति मूल्य�...
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र नेपाल पर्यटन बोडबीच बीमा गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता पश्चात नेपाल पर्यटन बोर्डका...
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीद्वारा सीईओ पदका लागि आवेदन माग
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) पदका लागि आवेदन माग माग गरेको छ । कम्पनीले रिक्त रहेको सीईओ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगितामार्फत आवेदन माग गरेको हो । इच्छुक आवेदकले बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांक शास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको छ। कम्पनीको गत साउन २१ गते सम्पन्न १५ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित १० प्रतिशत बोनस सेयर गत साउन १३ गतेसम्म सेयर अभौतिकीकरण गराएका सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको हो। कम्पनीले उक्त बोनस सेयर नेप्से र सिडिएस एण्ड...
काठमाण्डौ । नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको छ। कम्पनीको गत असार ३१ गते सम्पन्न २५ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित १५.५ प्रतिशत बोनस सेयर गत असार १७ गतेसम्म सेयर अभौतिकीकरण गराएका सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा गरिएको हो। कम्पनीले उक्त बोनस सेयर नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङमा...
नागरिक लगानी कोषद्वारा रु.१.६८ करोड कोभिड मृत्यु भुक्तानी
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोषले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएका सहभागीका हकवालालाई १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। कोभिड–१९ को सुरुआतदेखि नै कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरुका आश्रित परिवारलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले मृत्यु हुनेका हकवालालाई जनही २ लाख रुपैया उपलब्ध गराउने कोषले निर्णय...
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थापक सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक समूहतर्फको सेयर लिलामीमा राखिएको छ । कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फको १ लाख १६ हजार ४६४ कित्ता सेयर आज(मैसिर ६ गते)देखि लिलामीमा राखिएको हो । यो सेयर खरिदका लागि इच्छुक विद्यमान संस्थापकहरुले सूचना प्रकातिश भएको ३५ दिनभित्र बोलपत्र अवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । सेयर...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांस प्रस्ताव
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको मंसिर ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५ नगद लाभांस गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांस वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । यो लाभांस...
नेपाल इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थापक सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक सेयरधनी प्रुडेन्सियल क्यापिटल म्यानेजमेन्टको नाममा रहेको संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ । कम्पनीले म्यानेजमेन्टको नाममा रहेको १ लाख कित्ता सेयर आज(मंसिर ५ गते)देखि लिलामीमा राखेको हो । लिलामी सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ४०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सेयर खरिदका लागि...
शिखर इन्स्योरेन्स १८ औँ वर्षमा प्रवेश
काठमाण्डौ। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी १७ वर्ष पूरा गरी १८ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपालमा गुणस्तरीय निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिको सक्रियतामा स्थापित यस कम्पनीले आजैका दिन वि.सं. २०६१ मंसिर २ बाट बीमा सेवा प्रदान गरेको थियो। सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दा १० करोडको चुक्तापुँजी...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा क्षति मूल्यांकनकर्ताको तालिम प्रदान
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सोलुखुम्बुको भत्ताले गुठीभवनमा क्षति मूल्यांकनकर्ता तालिम सञ्चालन गरेको छ। बीमा समितिबाट जारी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी बीमा क्षति मूल्यांकनकर्ताको व्यवस्था गर्न कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमाका लागि कम्पनीका लागि तोकिएका जिल्लाहरु...
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सद्वारा बीमा सर्भेयरको सूची दर्ता गर्न आह्वान
काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बीमा सर्भेयरको सूची दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । कम्पनीले एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीबाट जारी बीमालेख अन्तर्गत परेका दाबीहरुको क्षती सर्वेक्षण अनुसन्धान तथा मूल्यांकन गर्नका लागि बीमा समितिबाट सर्भेयरको इजाजत प्राप्त इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई सूची दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो...
पहिलो त्रैमासमा यस्तो छ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा १२ करोड ३४ लाख २८ हजार रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.४७ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको खुद बिमाशुल्क आर्जन १४ करोड २६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ थियो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले लगानी...
शिखर इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क आर्जनमा सामान्य वृद्धि, मुनाफाको अवस्था कस्तो ?
काठमाण्डौ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा ४४ करोड ५० लाख ३८ हजार ०१० रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.५३ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ४३ करोड ४० लाख ३८ हजार ०३९ रुपैयाँ थियो। समीक्षा...
एनएलजी इन्स्योरेन्सको १०% बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आज नेप्सेमा कम्पनीको १० प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । कम्पनीद्वारा सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिएको १० प्रतिशत बोनस सेयर अर्थात १० लाख ९६ हजार ३७५.५० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १०...